Sarkaal Ka Tirsan Wasaaradda Caafimaadka DF oo Qarax Lagula Beegsaday Muqdisho. – Shabakadda Amiirnuur
November 8, 2017 9:12 am by admin Views: 83
Qarax ayaa barqanimadii maanta magaalada Muqdisho lagula beegsaday sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda ra’iisulwasaare Kheyrre.
Sarkaalkan ayaa isagoo gaarigiisa wata lagu weeraray wadada Maka-Almukarama gaar ahaan nawaaxiga Imagareeshanka, waxaana ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay inoo xaqiijiyeen inuu dhaawac halis ah gaaray sarkaalka oo lagu magacaabo Xirsi.
Dhaawiciisa ayaa waxaa laga soo bixiyay gaarigiiga oo isaga qudhiisa uu qaruxu saameeyay, waxaana loola cararay goob caafimaad oo aanan magaceeda la sheegin. Halka ay wax ka dheceen waxaa soo buux dhaafiyay ciidamo ka tirsan Amisom iyo kuwa dowladda.
Qaraxyada iyo weerarada ka dhanka ah DF iyo ciidamada shisheeye ayaa joogto ka ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana ay tani ka dhigan tahay in dowladdu ku fashilantay mashruucii ay mudada sideeda bilood ah ka shaqeeneysay ee ahaa (Xasilinta caasimadda)